Vidio - Geofumadas
Vidiyo iji mụta otu esi eji AutoCAD, ArcGIS na mmemme ndị ọzọ.
Mmekọrịta ndị Designers, nnukwu nkwado maka Civil 3D
Nke a bụ otu n'ime ọtụtụ ihe ngwọta nke Eagle Point nyere, otu ụlọ ọrụ ahụ na mmalite nke ninties masịrị anyị na ihe niile AutoCAD na-emeghị. Mgbe ntakịrị ntakịrị oge, nke ha chọrọ ịrara onwe ha nye ime ihe niile, ụlọ ọrụ ahụ laghachiri na ebumnuche mbụ ya, site na mgbe ahụ AutoDesk ugbua ...
Foto ndị mara mma na vidiyo nke ala ọma jijiji na mbufịt na Japan
Ọ bụ naanị na, egwu. Mgbe anyị nọ na ọdịda anyanwụ Europe anyị na-ebili na America anyị nwere ezigbo ụra, ala ọma jijiji nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 9 na Richter metụrụ Japan mgbe ọ bụ 3 n'ehihie ebe ahụ. Ikiri vidio nke otu mmiri si abanye ma buru ụlọ, ụgbọ ala na ụgbọ mmiri pụrụ iche. Ọ dịla…
Mepee Ngwaọrụ CAD, gvSIG edezi ngwaọrụ
E bidola ọtụtụ ọrụ na-atọ ụtọ, nke sitere na onyinye nke CartoLab na Mahadum La Coruña. gvSIG EIEL na-agụnye ndọtị dị iche iche, bara ezigbo uru n'ezie, ma maka njikwa onye ọrụ site na gvSIG interface, ụdị omenala na nkwado akaaka. Mana ihe kachasị dọta uche m bụ Mepee ...
Nke ahụ weghachite AutoCAD ws 1.2
E wepụtara mbipute 1.2 nke AutoCAD 2011 WS, nke ahụ ezigbo ihe onyinye AutoDesk na - enye gị ohere ịrụ ọrụ n'ịntanetị na ngwaọrụ mkpanaaka. Ọ bụ ezigbo mmụba, ọ bụ ezie na ụdị mkpanaka ahụ dị n'azụ ihe niile ụdị ntanetị dị. Nkwalite ndị a gụnyere: Nkwado maka ...
XYZtoCAD, nrụtụ ọrụ na AutoCAD
AutoCAD n'onwe ya anaghị eweta ọtụtụ ọrụ maka ijikwa nhazi ma ọ bụ mepụta tebụl site na isi. Civil 3D na-eme ya, mana ụdị nke mbụ anaghị eme ya, na ebumnuche ahụ mgbe anyị ga-arụ ọrụ na nhazi site na mkpokọta ọdụ, GPS ma ọ bụ osisi, anyị ga-aga macros gbasaa ebe ahụ ...
gvSIG Fonsagua, GIS maka mmiri aghụghọ
Ọ bụ ngwá ọrụ bara uru maka ọrụ ndị metụtara mmiri na idebe ihe ọcha, n'etiti usoro ndị ọrụ mmekọrịta. N'ụzọ zuru oke, Epanet nọ na-arụ ọrụ na nsonaazụ ọma, ọ bụ ezie na enweghị mmachi na usoro mmegharị ya na mgbanwe. Mgbe achọchara ihe kpatara gvSIG na Cooperation ghọrọ ihe anaghị ahụ anya site na ...
Free AutoCAD N'ezie
Mụta AutoCAD abụghịzi ihe ngọpụ na oge njikọta a. Enwere ike ịchọta akwụkwọ ntuziaka vidiyo n'efu na ntanetị. Nhọrọ a m gosipụtara gị bụ ma eleghị anya usoro kachasị mma iji mụta AutoCAD n'ụzọ dị mfe. Ọ bụ ọrụ nke Luis Manuel González Nava, ụdị nke dịrị na ...
Were nọ ebe ahụ ...
Nwatakịrị nwanyị ahụ mere pirouette, chigharịkwuru ya, bịaruo nso, makpu n’ala hụ ya na 34 centimeters. Mgbe ahụ ọ matara na ọ bụ ya, otu anya ahụ… Ọ bụ abalị ndị mmadụ na-arụ ọrụ mmanye n'ọfịs. Bọchị ndị ahụ mgbe egwu egwu U2 dara na keyboard nke Chamaco, nke wetara ...
Ntụrụndụ / n'ike mmụọ nsọ, Video
Isi okwu nke Acer Aspire One
Mgbe otu afọ na ọkara na-arụ ọrụ site na Acer Aspire One, na-eme CAD / GIS na ọkwa ọzụzụ, na-ezipụ, ụfọdụ ihe osise na nchọgharị, ebe a ka m chịkọtara ihe kachasị mkpa. Na nkowa m tụlere nsogbu anọ, mana ugbu a, m na-achịkọta ihe anọ ọzọ ma nyochaa ma ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ma ọ bụ na ọ gaghị aga n'ihu ...
Acer nwewa AutoDesk
Internet na Blogs, Video
Ihe PlexEarth Ngwaọrụ 2.0 Beta Dị
Otu ụbọchị gara aga, m na-ekwu maka akụkọ ụdị 2.0 nke PlexEarth Ngwaọrụ maka AutoCAD ga-eweta, otu n'ime mmepe kachasị dị mma m hụworo na Google Earth site n'aka onye otu AutoDesk Developer Network (ADN). Taa ka emeputara ụdị Beta, nke enwere ike ibudata, nwalee ya na ihe dị mkpa ...
AutoDesk obodo 3D dwg Google Earth PlexEarth
Geofumadas: Nkọwa 2010: Intanet
O doro anya na m ga-achọ inwe bọl anwansi wee nwee ike ịme ya dị ka santero, mana ọ bụghị azịza m, naanị m na-anwa ịnọ oge a na hammock nke bụ ọgwụgwọ na iko kọfị a dịka naanị nne di m na-eme, na-eme mkpọtụ na mkpisi, ofe efere. Na-akọwapụta, maka ndị naanị gụrụ ...
Internet na Blogs, My egeomates, Video
M, Cadastre na Google Earth
Aka m si njem m lọta, n'etiti nri Creole, nrụgide nke ntozu agba maka iko mba ụwa na afọ ojuju nke ọrụ, ebe a bụ mwepụta nke ahịrịokwu ụfọdụ echefughi echefu nke azụmahịa ahụ. Ndị na-ahụ maka ndụmọdụ: Mee ọsọ ọsọ! -Ike nzacha! Ndị katoonu: -Ufff !!! Kedu mgbe ha na-akwụ ụgwọ? Na appraisers: -ma ọ bụ na ha na-echetara m… Onye isi: -Print na ihuenyo! Ndị nke ...
Acer nwewa Google Earth
Ịdebe vidiyo na Google Earth
Enwetara m ajụjụ, nke mmadụ chọrọ bulite vidiyo na Google Earth, m ghọtara na ọ na-achọ igosi ụzọ gasị ma tinye vidiyo na ha. Ka anyị hụ ihe enwere ike ịme na ndị enyi anyị Mexico nwere ike itinye, ọ dị ka ịdebe foto. Embed a YouTube vidiyo Ana m Achọrọ m ...
Nke ahụ weghachite AutoCAD 2010
AutoCAD 2010, Chei! Nke a bụ aha Heidi nyere ya ka ọ gbanwee ụdị AutoCAD a, naanị otu afọ mgbe ọ gwasịrị anyị gbasara AutoCAD 2009. Na-abịa site na nwanne mama nwanyị nke na-ahụ ihe ọhụụ nke afọ ọ bụla maka afọ 17, ọ nwere ike ịlele anya. Ọtụtụ n'ime ha bụ ihe anyị chere ...
Ọ blọọgụ ọ bụla dị na oghere nwere ihe karịrị ntinye 500?
Windows Live Writter bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mma Microsoft mere nke ọma. Ntughari ohuru nke 14.0 di njikere ugbu a ibudata, ọ gunyere ndozi di egwu dika: Ọrụ nyocha, mgbe ị na-emepe ihe ochie post Preview taabụ na ala Mepụta onyonyo ihe osise Fanye vidiyo site na ...
Esi eji Google Earth mee ihe
Dị ka m gwara gị n'izu gara aga, taa a ga-ewepụta nsụgharị ọhụrụ nke Google Earth 5.0, ọ bụ ezie na anyị na-a smokeụ sịga ụfọdụ n'ime ihe ọ nwere ike iweta, enwere m obi ụtọ site na arụmọrụ iji hụ akwụkwọ akụkọ ihe mere eme nke ihe oyiyi Google wepụtara site na 2002 ruo ụbọchị. A ...
Ọ dị ebe ahụ na Flickr, na mberede anyị ga-emelite ihe anyị mụtara banyere ọdịdị ala na klas nke isii gbasara Eastern Europe, mana ọ bụ ihe na-atọ ụtọ; Ọ bụ maapụ a hụrụ site n'echiche nke ọdịmma dị n'akụkụ mmanụ (opekata mpe enwere ike mesie ike na nke ahụ) ... n'okpuru echiche nke onye mmebe ihe nkiri. ...
Cartografia, Ntụrụndụ / n'ike mmụọ nsọ, Video